Waa maxay taariikhda summada Google? | Hal-abuurka khadka tooska ah
Astaantu waa astaanta aqoonsiga sawirka shirkadda ee noocyo badan., waxaana lagama maarmaan ah in nashqaddeedu ay noqoto mid matalaysa oo si taxadar leh loo faahfaahiyay.
Qormadan maanta waxaan kaga hadlaynaa taariikhda astaanta google. Waxaan ka hadli karnaa Google, oo ah mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee goobta hadda jira, maadaama aan ku hayno maalinteena maalinlaha ah, iyada oo loo marayo hawlo badan oo ay nagu soo bandhigto qalabkeena, labadaba kombiyuutarada iyo mobilada.
Qof kastaa ma oga taariikhda ka dambeysa astaanta Google-ka, halka uu asal ahaan ka soo jeedo, haddii ay isbedello badan ku dhacday iwm. Taasi waa sababta aysan waligeed aad u badneyn, nafteena dhex gal koritaanka iyo horumarka mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka.
1 Waa maxay Google?
2 Taariikhda astaanta Google
3 Midabada Google
4 Waa maxay Doodles?
Waa maxay Google?
Google kaliya maaha makiinad wax raadis, laakiin waxa ku jira wax badan oo ku hareeraysan. Waa mid ka mid ah Shirkadaha Maraykanka ugu caansan adduunka oo dhan, wuxuuna ku takhasusay adeegyada kombayutarka iyo alaabooyinka la xidhiidha internetka.
Magaca Google wuxuu ka yimid erey xisaabeed oo loo yaqaan "Googol" taas oo astaan ​​u ah 10 kor loo qaaday ilaa 100, waxaa sidan oo kale ugu magacdaray abuurayaashiisa Brin iyo Page markii ay bilaabeen in ay horumariyaan mishiinkan raadinta.
Sannadkii 1997, waxa loo tixgeliyey naqshaddii ugu horreysay ee astaanta Google-ka ayaa soo baxday, logo abuuray by Brin laftiisa, iyada oo la adeegsanayo barnaamijka tafatirka sawirka.
Sida aan aragno summada wakhtigaas ma lahayn wax ka sarreeya, waxay aad u xasuusataa xarfaha aan ku abuuri karno WordArt.
In ka yar hal sano ka dib, 1998, dib u habeyntii ugu horeysay ee logo ayaa la soo saaray, naqshadeynta magaca magaca calaamad waxaa lagu arki karaa si ka sii badan oo la akhriyi karo iyo taas oo isku-dhafka midabku uu hore u joogay ee aynu maanta naqaano.
Intii u dhaxaysay 1998 iyo 1999, summada ayaa lagu daray a saamaynta hadh iyo calaacal dhamaadka magaca, oo lagu daray isbeddelka midabka. Waxay sheegeen in astaantan ay rabeen inay ku daydaan barta internetka ee Yahoo!.
Sannadkii hore, 1999, waxay go'aansadeen inay calaamadda siiyaan muuqaal xirfad leh. Isbeddelkan waxa uu la yimid gacan-ka-hadal naqshadeeye Ruth Kedar. Waxaa la arki karaa in naqshaddu ay ku saleysan tahay qoraal-qoraal leh serifs iyo midab isku mid ah oo la mid ah calaamaddii hore.
Summadani waxay sii ahaanaysaa in muddo ah sida sawirka shirkadda ee mashiinka raadinta, laga bilaabo abuuritaankiisa 1999, ilaa 2010.
Sannadkan 2010, sumadda ayaa maraysa a dib-u-qaabayn yar oo fudud, taasina waa in wejiga qoraalka ahi leeyahay dhumuc iyo hadh khafiif ah.
Saddex sano ka dib, 2013, ayaa saamaynta hadhku way baaba'aysaa Muujinaya calaamad ka fudud oo leh qaabka ugu yar.
Sanadkan 2014, Google wuxuu soo bandhigayaa naqshadaha ka kooban dhammaan alaabteeda iyo adeegyada. Soo jeedin naqshadeed ku salaysan qaababka joomatari. Google ayaa halis galisay oo u beddeshay qoraalkeeda mid aan lahayn serif. Ujeedada isbeddelkan ayaa ah in la awoodo la qabsiga nidaamyada taleefanka gacanta.
Marka laga soo tago isbeddelkan ku dhacay astaanta, Google waxa ay sidoo kale soo bandhigtay calaamad door muhiim ah ku leh codsigeeda taleefannada gacanta.
Kama hadli karno astaanta Google-ka iyadoo aan la tixraacin isticmaalka midabka; kuwaas midabyo fudud laakiin soo jiidasho leh.
Isticmaalka afartan midab, buluug, casaan, cagaar iyo jaalle, ma ahayn go'aan aan toos ahayn, laakiin doorkiisa waxaa dhiirigeliyay ciyaarta dhismaha Lego.
Sheekadu waxay sheegaysaa in kombuyuutarkii ugu horreeyay ee Brin iyo Page ka shaqayn jiray browserkooda lagu dhisay qaybo Lego ah oo ka kooban afarta midab ee astaanta.
Mid ka mid ah kala duwanaanshaha astaanta xagga midabka, waxay soo baxdaa marka dhacdo naxdin leh dhacdo ama xaqiiqo muhiim ah oo taariikhda ku jirta la xuso.. Ma aha oo kaliya inay ka soo muuqan karto nooca monochrome, laakiin sidoo kale waxay la qabsataa jilayaasheeda oo ay ku jiraan calaamadaha dhacdada si loo xuso.
Waa maxay Doodles?
Ma ka hadli karno Google-ka iyada oo aan tixraacin caankiisa Doodles, oo naga yaabisay dhacdo kasta oo muhiim ah oo adduunka ah. Waxaa jira ku dhawaad ​​2 Doodle oo lagu soo bandhigay aduunka oo dhan, qaar ka mid ah oo kaliya ayaa lagu isticmaalay wadan gaar ah mowduuca ay leeyihiin awgeed.
Tusaale ahaan, kan aan hoos ku aragno oo nagu dhiirigelinaya inaan is tallaalno oo aan isticmaalno maaskaro si aan u badbaadinno nolosha.
In ka badan 20 sano ayaa ka soo wareegay tan iyo 1997 markii aan la kulannay summada Google-ka ee ugu horreysay, taas oo u soo baxday inay noqoto mid ka mid ah noocyada ugu horreeya maanta.
Waxay soo martay todoba dib-u-qaabayn, ilaa laga gaadhay muuqaal fudud, daahsoon oo dhow, marka lagu daro wax-soo-saarka weyn.
Laakiin dhammaantood maaha war wanaagsan, Waxaa sidoo kale dhaleecayn loo jeediyay waxaana la sheegay in calaamadda G ee u taagan Google aysan ahayn mid la jaanqaadaysa, oo ma ahayn joomatari, sidaas darteed shirkadu si sax ah uma aysan abuurin sawirka shirkadda ee iyaga matalaya.
Dhaliilahaas waxaa ka aamusay khubaro kala duwan oo sheegay inay jiraan gebi ahaan go'aamo ula kac ah, tan iyo, marka la hagaajinayo sumadda si shabakad dhismo, xarafka G wuxuu siinayaa dareenka wareegga qumman, inkastoo aysan ahayn.
Shaki la'aan, Waa mid ka mid ah calaamadaha ugu caansan adduunka, sida ay u arkaan malaayiin isticmaalayaasha ah maalin kasta. Google-ku wuu yaqaannay sida uu ula qabsanayo isbeddellada.
Astaanta Google-ku waxay ku salaysan tahay taariikhdeeda oo dhan afar qodob oo ugu muhiimsan qaabaynta, fudaydnaanta, isticmaalka midabka, caddaynta iyo la qabsiga. Afar dhinac ayaa lagu ixtiraamaa mid kasta oo ka mid ah dib-u-qaabaynteeda.
Google mar kale ma beddeli doonaa calaamadeeda? Su'aashan si hubaal ah ugama jawaabi karno, laakiin iyada oo la tixgelinayo taariikhdiisa, ka jawaabi mayno boqolkiiba boqol maya. Aqoonsiga muuqaal ee ugu dambeeyay ee Google uu haysto, midka maanta, wuxuu u taagan yahay waxa Google uu yahay iyo horumarkiisa, ma aha si fudud mashiinka raadinta, laakiin waxay xukumaan nidaamyada hawlgalka ee kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Waa maxay taariikhda summada Google?
Qaababka Saamaynta Kadib ee Bilaash ah